Qaar ka mid ah shabakadaha internetka oo lagu jabiyay dagaalkii dhexmaray maxkamadaha islaamiga iyo isbaheysiga ka soo horjeeday
Inkasta oo ay aduunyada badankeeda ka jirto saxaafad aan dhexdhexaad ahayn oo taageerta mabaadi’ gaar ah amaba leh ujeedoonyin siyaasadeed hadana suxufiyiintu waxay iska ilaaliyaan in loo arko in ay la saftaan mid ka mid ah garabyo iska soo horjeeda. Waxaa kale oo iyaduna jirta in ay warbaahinta aduunyadu ka siman tahay ka dheeraanshaha faafinta wararka been abuurka ah oo sumcad xumo ku ridi kara kaalintooda warfaafineed.
Dalkeena Soomaaliya oo aan lahayn sharci ilaaliya nidaamka ay saxaafadu u shaqayso ayaa waxaa ka dhacday bililiqo wayn oo lagu sameeyay shaqadii suxufiyiinta. Wargaysyada madaxa banana, idaacadaha iyo shabakadaha internetka ayaa noqday mowjad soo burqanaysa oo ay kooxaha iska soo horjeedaa ku faafiyaan akhbaarta ay jecelyihiin iyagoo aan u aaba yeelin nidaamka saaxafada oo lagu yaqaan in lagu faafiyo warar xaqiiqo ah, dhexdhexaadna ah, islamarkaana leh meel laga soo xigtay.
Weriyeyaashu waxay ka mid yihiin dadka dantoodu ku xiran tahay xaaladaha murugsan. Dadka xirfadoodu adeegsiga meheradaas, waxaa ku jira beenlow, bililiqayste iyo caade qaate ay dalkiisa iyo diintiisa kala weyn tahay maalin qado laga bixiyo. Waxaa arintaa noo xaqiijinkara dagaalkii loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada ee dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho oo boqolaal masaakiin soomaaliyeed ah looga dhigay wax dhintay iyo wax dhaawacmay. Waxaa kale oo intaa sii dheer barakaca dadka iyo bur burka hantida ee ay gaysteen kooxihii dagaalka ku qaaday xaafadaha ay dadka rayidka ah degenayeen.
Wax layaab leh ma ahayn in ay kuwii sheeganayay in ay yihiin madax jagooyin u haya shacabkooda in ay galaan fal danbiyeedka intaa le’eg, inkasto horay loogu ogaa in ay xumaan dhamaanteed ka suurtowdo, haddana waxaa la qiyaasayey iney ku gaabsadaan xilalka ay ka hayaan dowlada oo ah heer wasiir. Waxaa is weydiin mudan, sidee ay saxaafada Soomaalidu uga hadashay dagaalkaasi? Maxaa maskaxdaada ku soo dhacay? Ma qososhay oo hadana ma calool xumaatay? Shabakadihii internetka ee taageerayay kooxihii madaafiicda ku laayay waayeelka iyo caruurta weli ma akhrisataa adiga oo ka raadinaya wararka Soomaaliya? Hadii ay war soo qaraan ma rumeysaneysa?
Waxaa xaqiiqo ah in aanay dadka oo idili jawaab isku mid ah ka bixinayn su’aalahaasi, balse waxaa wax Soomalida inteeda badan xaqiiq u noqotay in kuwii maatida ku soo duulay iyo shabakadihii internetka ee taagarayay ay labadubaa si siku mid ah ugu jabeen dagaalkii, maantana ay labadooduba suuqa ka wada bexeen.
Rochester, Minesota USA